Waa maxay VPN a?
Ereyga VPN waa mid aad u caan ah aduunyada IT-ga maanta waxaana lagu dhex tuuraa marar badan sida nidaam isku xira shabakadaha xogta. Waxaan hubaa in qaar ka mid ah aad ka wada kulantay shir ay maqleen ereyga "waxaan isticmaali doonaa VPN" mana ogeyn waxa ay ka hadlayaan. Si aad u noqoto mid aan caqli gal ahayn, noqoshada Agaasimaha Shabakada iyo Nabadgelyada sanado badan ayaan hadda maqlay "Su'aalaha ku saabsan isticmaalka VPN?" habka ugu badan ee qof aan run ahaantii xitaa ogayn waxa ay ahayd. Haddii aad ka ogaato VPNs markaa maqaalkani maaha mid adiga kugu habboon. Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan ogeyn waxa VPN uu yahay ama aad u yartahay wax yar oo ku saabsan iyaga markaa waxaan u maleynayaa in maqaalkan uu ku siin karo aragti aad ku aragto adduunka ee Shabakadda Gaarka ah ee Gaarka ah.
Nidaamka ugu badan ee VPN waa inuu isku xiro shabakado badan oo khaas ah oo ku xiran shabakad dadweynaha oo aan amaan ah sida Internetka. Shabakad gaar ah oo kiiskan ka mid ah waxay noqon kartaa shabakad kaas oo aan baabuurta si xor ah u heli karin dadweynaha. Haddii aan jebinno macnaha Shabakadda gaarka loo leeyahay ee gaarka ah, sida kor ku xusan waxay noqoneysaa sida soo socota. Labada qaybood ee ugu dambeysa ee "shabakad" waa shabakado gaar ah oo si aan toos ahayn ugu xiran shabakad dadweyne taas oo aan lahayn shabakad khaas ah oo ku oogan, abuurista "Shabakad gaar ah" oo iyaga u dhaxaysa.
VPN ayaa ugu badnaa sababtoo ah shirkadaha sii ballaarinaya ganacsigooda juquraafi ahaan. Kordhinta dalka oo dhan iyo xitaa aduunku waxay sameeyeen khibrad khariidad oo ah shirkado badan oo u furan suuqa caalamka. Baahida loo qabo in si dhakhso ah, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo si loo ilaaliyo baahidooda ganacsiga ayaa noqday mid weyn oo ka weyn. Kahor intaan la isticmaalin qalabka VPN, waa in la isku xiro xarumo qaali ah oo qaali ah oo guud ahaan ku kordhay kharashka marka ay ku koraan masaafada. Shirkado fara badan ayaa ku soo bandhigay habab fog oo la adeegsanayo goobaha dhexe oo leh xarumo 800 oo laga yaabo inay soo rogaan khadadka telefanka ee badan. Dabcan kharashka lagu hayo khadadka iyo kharashka lambarka 800 ayaa sidoo kale qaali ah. Iyada oo ay caan ku tahay internetka sii kordhaya waxay ahayd arrin waqti uun ka hor tiknoolajiyada oo isticmaali karta shabakad balaadhan oo caalami ah oo horey u dhistay isku xirnaanta shabakada amniga.
Maadaama shirkadaha intooda badani ay ku tiirsan yihiin internetka e-maylka iyo shabakadaha internetka guud ahaan waxay lahaayeen xidhiidh ku filan oo la heli karo oo ah meelaha ugu badan ee ay u isticmaali karaan LAN-ka LAN (Shabakadda Shabakadda) ee VPN. Mararka qaarkood xawaaraha xawaaraha (xawaaraha) ee xidhiidhinta waa inay noqotaa in la cusbooneysiiyo si loo helo xog dheeraad ah laakiin waxay noqon kartaa mid ka qaalisan inta lagu darayo in lagu daro xiriir dheeraad ah oo ku saabsan macluumaadka shirkadda kali ah, oo aan lagu xusin kharashka dheeraad ah wareegga wuxuu ku xiran yahay meesha uu ka joojin lahaa juquraafi ahaan. Xaaladaha qaarkood oo xafiis fogi ay aad u yaryihiin si ay u yeeshaan wareegga u gaarka ah waxay u isticmaali lahaayeen internetka dialup-ka ee hawlahaas laakiin taasi waa arrin, waxaad ka dhisi kartaa Macmiilka VPN VPN ee ku saabsan isku-xirka khadka-dial-ka. Muuqaaladani waxay noqonayaan kuwo caan ah oo badalaya tiknoolajiyado waaweyn oo la mid ah muraayad loo isticmaalo in lagu isticmaalo shabakad WANs (Wide Area Network).
Amniga waa dabcan walaac marka gaadiidka shabakadaha gaarka ah ay isticmaalayaan shabakad dadweyne oo dhexdhexaad ah sida caadiga ah VPNs waxaa lagu dhisay shabakadaha iyadoo la adeegsanayo tunnel VPN encrypted. Waxaa jira noocyo badan oo VPN ah oo lagu kala saari karo lakabyada OSI (Model Model Interconnection Model) laakiin ma sii wadi doono qoto dheer halkan tan oo ka baxsan baaxadda dukumiintigan cusub.
Dukumintigan waxaan u kala soocayaa laba qaybood: VPN-yada Loo-qiray iyo kuwa aan la Xifdiyey.
VPN-ku qarsoodi ah
VPN-ka la isku-xidho ayaa xaqiijin doona gaadiidka loo soo diro shabakad dadweyne oo aan la ilaalinayn iyada oo la adeegsanayo noocyo kala duwan oo qaabab lagu kalsoonaan karo. IPSec waa qaabka ugu caansan ee tunnel VPN ee isticmaalka maanta marka la dhiso tunnel VPN oo ammaan ah internetka.
VPN aan la xafidin
VPN la'aanta ah waxaa loola jeedaa in xogta ka soo baxaysa dhamaan VPN aan la xaqiijin dhammaan ama waxaa lagu xaqiijiyay iyada oo aan ahayn marka laga reebo xogta xogta. MPLS (Iskudhafka Saxeexa Iskudhafinta badan) VPNs waxay isticmaalaan kala qaybsanaan khadka ah iyada oo loo marayo isku-xirka ficilka ah ee ka dhexeeya labada shabakadaha khaaska ah si loo xaqiijiyo socodsiinta taraafikada u dhexeeya oo kaliya iyaga guud ahaan shabakadda dadweynaha. Taabashada GRE (Generic Routing Encapsulation) ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa sidoo kale si loo qariyo shabakad caalami ah oo ka soo baxda meelaha gaarka loo leeyahay oo xitaa xoojiya nidaamyo dhowr ah gudaha gudaha TCP / IP, oo caadi ahaan aan loo marin dhammaan shabakadda IP. Noocadan noocan ah waxaa laga yaabaa in lagu dhajin karo habka sare ee lakabka sida SSL (Secure Socket Layer).
Sidaa awgeed waxaan aragnaa in VPNs ay ku badbaadin karaan lacag iyadoo la dhimo kharashka wareegga u dhexeeya xafiisyada fog iyo xarumaha, laakiin VPNs ayaa sidoo kale isticmaali kara shirkado dhowaan ay soo iibsadeen shirkad kale, labadaba hadda waxay u baahan yihiin in la isku dhafo. Tani waxay si gaar ah u adeegsanaysaa shabakadaha u baahan in si dhakhso ah laysugu keeno ama ay leeyihiin xuduudaha juqraafiga weyn. Labada nooc ee shabakadaha noocyada ah waxaa loo tixgelin doonaa VPN Intranet. Maxaa dhacaya haddii shirkado badani ay sameeyaan shuraako oo ubaahan in ay wadaagaan khayraadka khayraadka ee qiimaha leh? Isticmaal Xag-dheer ah ee VPN ayaa loo isticmaali karaa xaaladdan gaar ah. Isticmaal kale oo loogu talagalay VPN waa in la taageero dadka isticmaala moobaylka ama guryaha kuwaas oo ubaahan in ay galaan kheyraadka shabakadda ee xafiiska.
Ammaanka, kalsoonida, miisaanka iyo fududaanta maamulka ee laga heli karo qaabab badan oo VPNs ah maanta ma ahan wax la yaab leh caankooda ay sii korayaan. Hal shay waa mid, iyada oo aan loo eegin hababka kala duwan ee ay tahay in la aasaaso VPN ujeedada isku xirnaanta shabakada xidhiidhka ah iyadoon loo eegin goobta juqraafi iyo soo celinta dhaqso ah ROI (Ku noqoshada maalgashiga) ee qalabka software / qalabka iyo laynka kirada dhaqameedku waa isku mid . Waxaan rajeyneynaa marka xigta ee aad ku jirto boos ay ereyga VPN la soo saaro sida xal wax ku ool ah waxaad si fiican u fahmi doontaa fikradda ah Shabakadda Gaarka ah ee Gaarka ah.